Musqusha Musqusha Swivel Burushka Nickel
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Qasabada Musqusha Xarunteedu Wanaagsan ee Golaha Bullaacadda
qiimeeyay 4.85 out of 5 ku salaysan 26 ratings macaamiisha
(26 dib u eegista macaamiisha)
Faahfaahinta tubbada qubayska qolka maydhashada:
4-in Xarun meeleeye dhexe ah
Isku soo ururinta birta
Kabayare gacanta ADA u adeegsanaya fududeynta isticmaalka
Xarkaha wiishka lagu daray
2321400 tilmaamaha rakibaadda
Tuubada musqusha ee weelka 2320400 markab waligeed ma dhalin doonto dhibaatooyin taagan.
Qulqulka dhammeystirkiisa, tubbada musqusha ee weelka lagu qubeysto waligeed ma helikarto.
Kordhinta Riixida & Khatimidda Soo-ururinta bullaacadaha iyo cUPC Tubooyinka rukhsadda qaybinta shatiga leh.
Koobka arc-ga oo sareeya wuxuu siiyaa caddeyn dheeraad ah iyo marin u helid weyn oo weelka lagu qubo.
3-dalool qalooc leh oo leh 4-inji xarun-koronto oo loogu talagalay rakibaadda fudud. Cabbirka Hole: 30-36mm; Calool dhererka Max Deck: 30mm.
Laba gacan qabasho oo loogu talagalay socodka fudud iyo xakameynta heerkulka.
Waxyaabaha aasaasiga ah ee dhismaha ee loo yaqaan 'nickel nick sọ' dhammeystiran oo waara oo lagu kalsoonaan karo.
SKU: 2321400 Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: 2 Qabashada, 4 inch, Nickel caday
Biyo qabow / kulul
Musqusha qasabadda / qolka musqusha
Marka hore, waxaan ahay 80 sano jir oo ma ihi tuubiste. Qaybta ugu adag ee mashruucu waxay ahayd ka qaadista qasabadihii hore. Tuubbooyinka cusub ee 'WOWOW' waa tayo aad u fiican, qiimo aad u fiican, aad u soo jiidasho badan, wax kasta oo shaqada looga baahan yahayna waa lagu daray taas oo ka dhigaysa shaqada mid aad u fudud DIY. Waxaan aad ugu talin lahaa badeecadan.
Waxay umuuqataa mid aad ufiican barta qiimaha. Waxaan jeclaan lahaa in magaca magaca uusan muuqan, laakiin heshiis aad uma weyna. Nikkelka la caday ayaa la jaan qaada qalabka kale ee nikkel ee aan haysto. Rakiibtu waxay ahayd mid fudud oo dhammaan qaybaha ayaa lagu soo daray.
Qalab toos ah u rakib. Gacanku si habsami leh ayuu u socdaa, runti wuu fiican yahay. Nadiifinta dheeraadka ah iyadoo ay ugu wacan tahay qaanso dheer, oo leh u oggolaaneysa qol yar oo dheeraad ah in lagu sameeyo waxyaabaha saxanka lagu dhaqo (dharka lagu dhaqo gacmaha, burushka cadayga, iwm) waxay ka dhigan tahay waxyaabo yar oo soo gala si loola xiriiro halka ay biyuhu ka soo baxayaan, sidaa darteed soo saar nadiif ah.
Waxaan ku sameeyay tijaabooyin fara badan qasabadaha dhowr bakhaar oo lagu hagaajiyo guryaha waana inaan dhahaa qasabadani waxay umuuqataa in laga fiicnaaday kuwa qaaliga ah. Waan yaabay. Waa wax culus oo filtarka ayaa si habsami leh u furan oo ku xirmaya sidoo kale dareen fiican. Waan ku qanacsanahay ilaa iyo haatan. Waxaan iibsan doonaa dhowr nooc oo dheeri ah oo kuwan ka mid ah mustaqbalka dhow.
ffordable, stylish, qasabad si fiican loo sameeyey. Aad bay u fududahay rakibisteeda iyo xitaa waxay lahayd tilmaamo lacala haddii aad u baahatid iyaga. Waxaan diyaar u ahay in aan dalbado inbadan si aan ugu badalo qasabadaha kale ee musqusha ee gurigayga yaala. Xaqiiqdii waa u qalantaa qiimaha. Waxay umuuqataa qasabadaha qiimaha badan laakiin waxbadan ka raqiisan laakiin iyagu ma aysan hurin dhismaha qasabada.
Tuubada ayaa u muuqata mid aad u fiican. Mid labaad ayaan ku dalban doonaa musqusha kale. Sidii aan idhi, Waan jeclahay qasabadda oo hadda leh god cusub, waxaan si farxad leh u siinayaa sheygan SHAN Xiddig.
Kadib markaan aqrinay dib u eegista iyo isbarbar dhiga magacyada waxaan iibsanay wejigan musqusha si aan ubadalno midkeenii hore. Waxay ahayd mid aad u fudud in la rakibo iyo naqshad aad u fudud oo aad u fudud in la nadiifiyo. Waxaan ku soo iibsanay lacag caday ah wajigan runti wuxuu u muuqdaa mid ku fiican musqushayada.
Waxaan dhawaan iibsanay guri waxaanan ubaahanahay inaan badalo qasabadaha. Waxaan iibsaday tan waxayna ahayd mid ku habboon. La yimid wax kasta oo aan u baahdo. Si fudud loo rakibo waxay umuuqataa mid aad u jilicsan.
Ma aqaan wax kale oo aan iraahdo… laakiin waan jeclahay qasabaddaan! Dib-u-eegiddani waa midkeygii 3-aad ee kuwan ka mid ah. Waxaan iibsaday kii 1aad sanad ka hor walina waa adag yahay waana xoogan yahay taasna waxaa la jooga caruurta guriga ku jirta! Waxay sifiican kor ugu taagtay in aan iibsaday mid 2aad. Waxaan doonayay inaan u helo wax ka geddisan saxanka qubeyska, laakiin maaddaama tuubbadaani ay si wanaagsan iigu fiicnayd, oo ay u eg tahay mid qaali ah, waxaan is tusay inaan ku sii dhego Waana ku faraxsanahay inaan sameeyay. Haddii aan haysan lahaa saxanka 4aad, mar labaad ayaan iibsan lahaa!
Gaarsiinta degdega ah iyo cutubyadu si fiican ayey u shaqeeyeen. Waxay ahaayeen casriyeyn weyn oo loogu talagalay 20 yr jir kali kali ah, qasabado caag ah. Xiritaanka waa mid aad u adag oo aan lahayn wax dhibco ah haba yaraatee. Qiimaha, uma arko sida qofku u waayi karo iibsashada qasabadahaas.
Aad ayaan ugu farxay iibsashada qasabaddan musqusha. Tayada waa heer sare. Way fududahay in la rakibo waxaana ku jiray dhammaan qaybaha aad u baahan tahay si aad shaqada u qabato. Waxay umuuqataa mid aad uqurux badan isla markaana sifiican ulafiican dhamaan qalabka kale ee burushka nikkel ee musqusha. Shaki iigama jiro in qasabadani ay socon doonto sanado badan.
Qasabadda musqusha ee petite iyo waxqabadka leh.
Waxay ku habboon tahay dhammaantood wax aan waxba tarayn.
Suugaan ahaan waxaad ubaahantahay oo keliya gacmahaaga iyo biinanka la hagaajin karo. Tuubbada tuubbada iyo cajaladdu looma baahnayn gabi ahaanba, wax daad ahi ma jiraan haba yaraatee. waxay umuuqataa xarrago iyo wanaag.
Tuunbooyin fiican, muuqaal fiican. Waxaan rabay gacan qabsiyo gooni ah oo qabow / qabow maadaama aanan hubin hal gacan oo aan daadin. Sidan ayaan ku hubin karay in labada dhinacba si sax ah loo sugay. (adoo adeegsanaya cajalad biibiile dabcan) Rakibaadin fudud. Si fiican ayuu u shaqeeyaa. Gacmuhu waxay u soo noqdaan sidii neecaw. Ku dheji saxankeyga si fiican. Oo iyagu si macquul ah ayaa loo qiimeeyay. Waxaan iibsaday labo.
Marka si fiican ayaan u iibsannay laba, mid musqul kasta. Qurux badan Adag raadis. Waxaan jecelahay sida ay u sareeyso tuubada buuxinta huumadeena.
Tani waa qasabad weyn oo qiimo aad u fiican leh! Waxay ku qaadatay aabahay 30 daqiiqo inuu sameeyo 2 qasabad. Waxaan dalbaday sedex meelood meel qubayskeena martida ah walina waxaan si walwal leh u sugayaa ninkayga oo badalaya. Ma jiraan wax arrimo ah oo ilaa hadda na soo maray. Waan jeclahay qulqulka pop up!
Kuwani waxay u muuqdaan kuwo quruxsan oo qiimahoodu fiican yahay. Waxaan ku badalay dhamaan saxanada musqulaashayda kuwan (8 wadar). Waxay umuuqataa mid quruxsan rakibaadiisuna waxay ahayd mid si toos ah uhoreysa nin ila mid ah oo qabta shaqada tuubada markii ugu horeysay. Waxay ku timaadaa joogsade wanaagsan oo sidoo kale nikkel ah iyo tayada tuubbooyinka ayaa wanaagsan.
Tuubadaani waa mid aad u fiican. Si fiican ayaa loo sameeyay, fududahay in la rakibo, oo sifiican ayuu u shaqeeyaa. Naqshadda pop-drain-ka ayaa aad uga fudud in la rakibo marka loo eego bullaacadaha qaabka duugga ah sidoo kale. Waxaan rabaa inaan xoogaa ka helo guriga oo dhan.
Si fudud loo rakibo. Waxay u egtahay mid aad u fiican. Wax qurxoon maahan laakiin waxay u egtahay mid jilicsan. Si fudud loo isticmaalo.
Waxaan u iibsaday qasabaddan gurigeenna kirada ah oo wiilkaygu wuu rakibay. Weligiis ma uusan rakibin qasabad qasabad laakiin wuxuu u arkay inay tahay mid aad u fudud oo dhaqso badan. Oo waxay u egtahay wax fiican.
Kuwani waa qasabado fiican oo qiimo fiican leh. Iyagu maahan wax aad u qurux badan laakiin waa qiime aad u fiican haddii aad rabto inaad kor u qaaddo musqulahaaga. Ma ahayn mid aad u adag in la rakibo oo umuuqda mid waara oo si fiican u shaqeeya
Waxaan iibsaday fekerkaan waxaan ku heli lahaa wixii aan ku bixiyay, musqushayada dheeriga ah. Waxaan helay waddo ka badan intii aan bixiyay. runti waxay umuuqataa oo dareemeysaa isku mid cutubka magaca qaaliga ah ee aan usoo iibsaday musqusha weyn. aad ugu faraxsanahay. dib ayaan wax uga iibsan doonaa, anigoo ka qiimeynaya tayada aan ahaan doonin muddo dheer illaa aan u baahdo wax kale mooyaane.
In kasta oo qiimaha macquulka ahi yahay, haddana badeecadani way dhaaftay filashadayda. Way fududahay in la rakibo oo shaqeeya oo muuqaal fiican.
Waxaan ku bedelnay dhamaan tuunbooyinkii dhamaan musquladeena kuwaan. Si fudud loo rakibo-aad uga fudud kan ugu horreeya ee aan ka soo iibsannay dukaankeenna qalabka maxalliga ah! Dherer weyn oo tuubada musqusha sidoo kale.
Ninkayga ayaa si dhakhso leh u rakibay, qaybta ugu adkayd waxay ahayd in kuwii hore laga saaro. Waxay yihiin bir wanaagsan oo culus, midabku waa fiican yahay. Gacan-yarayaashu way yar yaryihiin, laakiin dhererka tuubada ayaa ka dhigaysa mid isaga ku habboon. Kuwani waa ku habboon yihiin inay awoodaan inay ku dhaqaan wejigaaga saxanka saxarada iyadoon wajigaaga hoos loo dhigin saxanka. Mid baan u iibinay wiilasheena musqusha, aad ayaan u jeclaanay waxaan u iibsanay labo sayidkeena.
Tani waa wax soo saar aad u wanaagsan, marwalba dib u eegis kuma sameeyo laakiin badeecadani waxay ahayd mid gaar ah maxaa yeelay waxay ku jirtay tuubbooyin cusub oo xoog leh oo tagaya tuubada. Tani waxay ahayd mid lama filaan ah oo aad loogu riyaaqay. way fududahay in la rakibo mana daadato.
La iibiyey: 31
Cube Matte Black Basin Mixer Tubada
WOWOW 3 Hole 4 Inch Centerset Qasabad
La iibiyey: 43